ရုံးတင်စစ်ဆေးရှေ့နေ: တရား, အကွံဉာဏျ၏နေ့စွဲကိုယ်စားပြုမှု, ရှေ့နေချုပ်, Hannover ဟမ်းဘတ် Bremen
တရား။ ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှု။ ရက်ချိန်း
Amtsgericht မကောင်းပါ Iburg
Amtsgericht မကောင်းပါ Gandersheim
ခရိုင်တရားရုံး Hanns ။ စီးဆင်း
ခရိုင်တရားရုံး Herzberg နံနက် Harz
ခရိုင်တရားရုံး Osterode နံနက် Harz
Bielefeld site ကို
တရားလိုသို့မဟုတ်တရားခံကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အမျိုးမျိုးတရားစီရင်ရေးတရားစွဲဆိုမှုတည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အောက်ပိုင်း Saxony, Bremen နှင့်ဟမ်းဘတ်အတွက်တရားရုံးများတွင်ကိုယ်စားလှယ်များချိန်းသည်။
သငျသညျအောက်ပိုင်း Saxony, ဟမ်းဘတ်နှင့် Bremen တရားရုံးရက်စွဲများအတွက်ရှေ့နေအဖြစ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပင်သူတို့အားရက်စွဲများကိုလေ့ကျင့်ချင်ကြပါဘူး, ငါတို့တစ်ဦးချင်းအပေါ်အခြေခံဖြစ်နဲ့ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်စွယ်စုံမှုခင်းအလေ့အကျင့်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအပြီးအပိုင်လိုပါလိမ့်မယ်။ အကယ်.
Hanover (အားလုံးဟင်းလျာများ, ရက်စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ ခရိုင်တရားရုံး Hannover, Hanover ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Hannover, ဒေသဆိုင်ရာအလုပ်သမားတရားရုံးက Hannover, Hanover အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံး, Sozialgericht Hannover, အောက်ပိုင်း Saxony ဘဏ္ဍာရေးတရားရုံး)
ခရိုင်တရားရုံး Burgdorf| Amtsgericht Burgwedel | ခရိုင်တရားရုံး Lehrte Amtsgericht Neustadt | ခရိုင်တရားရုံးဤနေရာသို့သွားရန် | ခရိုင်တရားရုံး Wennigsen
Brunswick (အားလုံးဟင်းလျာများ, ရက်စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ ခရိုင်တရားရုံး Braunschweig, Braunschweig ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး, အလုပ်သမားရေးရာတရားရုံးက Braunschweig, Braunschweig မြင့်မားဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး, Braunschweig အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံး)
Hildesheim (အားလုံးဟင်းလျာများ, အထူးသဖြင့်နေ့စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ ခရိုင်တရားရုံး Hildesheim, Landgericht Hildesheim)
ခရိုင်တရားရုံး Alfeld | Amtsgericht Elze
ထို (အားလုံးဟင်းလျာများ, အထူးသဖြင့်နေ့စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ Amtsgericht cell, Landessozialgericht Niedersachsen, ဆဲလ်တရားရုံး)
ဟမ်းဘတ် အထူးသဖြင့် (အားလုံးဟင်းလျာများ, ဟမ်းဘတ်ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး နှင့် ဟမ်းဘတ်တရားရုံး)
Bremen အထူးသဖြင့် (အားလုံးဟင်းလျာများ, ခရိုင်တရားရုံး Bremen, ခရိုင်တရားရုံး Bremen နှင့် Bremen မြင့်မားဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး)
ကမ္ဘာကြီး (ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး Verden, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Verden, ခရိုင်တရားရုံး Verden)
Göttingen (အားလုံးဟင်းလျာများ, အထူးသဖြင့်နေ့စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ ခရိုင်တရားရုံးGöttingen, ခရိုင်တရားရုံးGöttingen)
ခရိုင်တရားရုံး Duderstadt | ခရိုင်တရားရုံး Hanns ။ စီးဆင်း
bückeburg (အားလုံးဟင်းလျာများ, ရက်စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ Nds ။ ပြည်နယ်တရားရုံး, ခရိုင်တရားရုံးBückeburg, ခရိုင်တရားရုံးBückeburg)
Hameln (အားလုံးဟင်းလျာများ, ရက်စွဲကိုယ်စားပြုမှုဟာမတိုင်မီ ခရိုင်တရားရုံး Hameln, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Hameln)
Oldenburg(Amtsgericht Oldenburg, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Oldenburg, Oldenburg မြင့်မားဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး, Oldenburg ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး, လူမှုတရားရုံး Oldenburg)
Amtsgericht Delmenhorst | Amtsgericht Nordenham | ခရိုင်တရားရုံးဘရိတ် | Amtsgericht Wildeshausen
Osnabrück (ခရိုင်တရားရုံးOsnabrück, ခရိုင်တရားရုံးOsnabrück, လူမှုတရားရုံးOsnabrück)
Amtsgericht မကောင်းပါ Iburg | ခရိုင်တရားရုံးBersenbrück
Lüneburg (ခရိုင်တရားရုံး Lueneburg, ခရိုင်တရားရုံး Lueneburg, အောက်ပိုင်း Saxony အဆင့်မြင့်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံး, လူမှုတရားရုံး Lueneburg, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Lueneburg)
စင် (ခရိုင်တရားရုံး Stade, Stade ခရိုင်တရားရုံး, လူမှုတရားရုံး Stade, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Stade)
Aurich (ခရိုင်တရားရုံး Aurich, ခရိုင်တရားရုံး Aurich, လူမှုတရားရုံး Aurich)
Wilhelmshaven (Wilhelmshaven ၏ခရိုင်တရားရုံး, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Wilhelmshaven)
Emden (Amtsgericht Emden, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Emden)
Lingen (ခရိုင်တရားရုံး Lingen, အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Lingen)
Nienburg (အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး Nienburg, ခရိုင်တရားရုံး Nienburg)
ဗဓေလသစ် (ခရိုင်တရားရုံး Clausthal-Zellerfeld, ခရိုင်တရားရုံး Goslar, ခရိုင်တရားရုံး Herzberg နံနက် Harz, ခရိုင်တရားရုံး Osterode နံနက် Harz, Amtsgericht မကောင်းပါ Gandersheim, ခရိုင်တရားရုံး Seesen)
ပိုများသော Amtsgericht Salzgitter | Wolfsburg ခရိုင်တရားရုံး | Amtsgericht Wolfenbüttel
Amtsgericht Helmstedt | Amtsgericht Einbeck | ခရိုင်တရားရုံး Northeim | Amtsgericht Gifhorn | ခရိုင်တရားရုံး Holzminden | ခရိုင်တရားရုံး Peine | Amtsgericht Rinteln | Amtsgericht Stadthagen
ခရိုင်တရားရုံး Dannenberg (Elbe) | Amtsgericht Soltau | Amtsgericht Uelzen | ခရိုင်တရားရုံး Winsen
ခရိုင်တရားရုံးBremervörde | Amtsgericht Cuxhaven | ခရိုင်တရားရုံး Langen | ခရိုင်တရားရုံး Otterndorf | ခရိုင်တရားရုံး Tostedt | ခရိုင်တရားရုံး Zeven
Amtsgericht Diepholz | Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck | ခရိုင်တရားရုံး Rotenburg (Wümme) | Amtsgericht Stolzenau | Amtsgericht Sulingen | Amtsgericht Syke | ခရိုင်တရားရုံး Walsrode
ခရိုင်တရားရုံးလွတ် | ခရိုင်တရားရုံးမြောက်အမေရိက | Amtsgericht Wittmund
ခရိုင်တရားရုံး Cloppenburg | ခရိုင်တရားရုံး Jever | ခရိုင်တရားရုံး Varel | Amtsgericht Vechta | ခရိုင်တရားရုံး Westerstede
ခရိုင်တရားရုံး Meppen | Amtsgericht Nordhorn | Amtsgericht Papenburg
အဓိကပြောဆိုချက်ကိုမတိုင်မီ§ 242 BGB အောက်မှာလုပ်နိုင်မပေးမူအရသတင်းအချက်အလက်ပိုင်ခွင့်ကိုသူချုံးဆောင်ရွက်ပါသည်။
222 ထံမှ BGH တရားသဖြင့်စီရင် VI ကို ZR 16 / 25 ။ ဇူလိုင်လ 2017
BGB §§ 195, 242, 372, 812 Be; HintG NRW §§ 4, 22 ABS ။ 3
VI ကို။ 20 အပေါ်ကြားနာအပေါ်ဖက်ဒရယ်တရားရုံး၏မြို့ပြတိုင်း။ ဇွန်လ 2017 ဥက္ကဋ္ဌတရားမျှတရေး Galke, တရားသူကြီးကိုပွင့်လင်းအပေါက်, တရားသူကြီးဒေါက်တာ Oehler နှင့်ဒေါက်တာ Roloff နှင့်တရားသူကြီးဒေါက်တာ သေးငယ်သော
6 တရားလျှောက်ထား၏တည်းဖြတ်မူဖြစ်ပါတယ်။ 12 ၏, Cologne ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး၏ Zivilkam-မဲ။ 2016 ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါစေ။ အဆိုပါကိစ္စအတွက် Beru-Fung တရားရုံးတောင်မှဒီအယူခံဝင်များ၏ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အသစ်တစ်ခုရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အဖမ်းခံရသည်။
အလုပ်အကိုင်အစင်တာများ၏န်ထမ်းများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကိုမှသတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုမှတစ်ဦးကညာဘက်ပုအာဏာပိုင်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဖို့ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ဝန်ထမ်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဆန့်ကျင်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုယနေ့ Leipzig အတွက်ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလျှောက်ထားသည့်တရားခံ Cologne, Nuremberg စီးတီး, ဘာလင်နှင့်ဘာလင်ရဲ့ Treptow-Koepenick ယောဘ Center ကအဆိုပါ Freedom ကိုပြန်ကြားရေးအက်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုဖုန်းကိုစာရင်း access ကိုကိုးကားပြီးရှာကြာလော့။ အလုပ်စင်တာများ၏ကျေးကျွန်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစံတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များနှင့်အတူအထူးတပ်ဆင်ထားဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ၏တစ်ဦးချင်းစီဖြေကြားကြသည်။
တရားစွဲဆိုခဲ့သဖြင့်အခိုင်အမာအဆိုပါတောင်းဆိုမှုများအငြင်းပွားမှုဆဲခဲ့ကြသည်လျှင်, တိုင်ကြားမှုများအယူခံအပေါ်အောင်မြင်သောကြဘူး။ အဆိုပါဒီမှာ Bundesverwaltungsgericht ပယ်ချထိန်းချုပ်မှုဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အရပ်ဘက်တရားရုံးရှေ့တော်၌ထိုကြားနာ (လျှို့ဝှက်တရားရုံးများ၏Mündlichkeitsgrundsatz, တားမြစ်ချက်)
ပါးစပ်၏ 128 နိယာမ§; ကျမ်းစာ၌ရေးထားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
(2) သာလုပ်ငန်းစဉ်အနေအထားအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိလျှင်ရုတ်သိမ်းမည်အကြောင်းအရာပါတီများ၏သဘောတူညီချက်နှင့်အတူတရားရုံးကြားနာမှုမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်အကျဉ်းချုပ်ကိုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ပေးပို့ဘို့ရက်စွဲအထိတင်သွင်းနိုင်ပါသည်မကြာမီပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။ ထက် ပို. သုံးလပါတီများ၏သဘောတူညီချက်ကတည်းကကြာလျှင်ကြားနာခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးကဆုံးဖြတ်ချက် inadmissible ဖြစ်ပါတယ်။
(4) မဟုတ်ရင်ကြားနာခြင်းမရှိဘဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်မဟုတ်လျှင်တရားစီရင်ပိုင်မဟုတ်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များ, သည်းခံရ၏နိုင်ပါတယ်။
78 ZPO Anwaltsprozess §
(1) ဒေသတွင်းတရားရုံးများနှင့်အဆင့်မြင့်ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးမီ, ပါတီများရှေ့နေကကိုယ်စားပြုထားရပါမည်။ ထို့နောက်ပါတီများမှာလည်းမတိုင်ခင်ရှေ့နေကကိုယ်စားပြုထားရပါမည်သည့် Judicature အက်ဥပဒေအားမိတ်ဆက်အက်ဥပဒေ§ 8 ၏အခြေခံပေါ်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌တည်နေတဲ့အဓိပတိဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်တရားရုံးမီပါတီဖက်ဒရယ်တရားရုံးရှေ့နေနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရှေ့နေကကိုယ်စားပြုထားရပါမည်။
(2) အရည်အချင်းပြည့်မီသောတရားသူကြီးနှင့်အတူန်ထမ်းများငှားရမ်းခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်န်ထမ်းများကအယူခံဖို့ခွင့်များအတွက်အာဏာပိုင်များနှင့်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အများပိုင်လုပ်ငန်းတာဝန်များထွက်သယ်ဆောင်ရန်သူတို့ကိုကဖွဲ့စည်းများမှအများပြည်သူပညတ်တရား၏ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ, သင်တန်းသားများအားဖြင့်အပါအဝင်အများပြည်သူပညတ်တရားအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်အခြားအာဏာပိုင်များသို့မဟုတ်အလောင်းတွေ, စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်သူတို့ရဲ့အများပြည်သူတာဝန်များကိုပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းရှိလော့။
(4) 1 နှင့်2ကိုယ်စားပြုအပိုဒ်နှင့်အညီအခွင့်အာဏာသောသူတစ်ဦးကရှေ့နေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
ယင်းပြဌာန်းချက် directional အာမခံဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်နယ်မြေတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖွင်
သည်အရာကိုပြုသင့်သည်တရားသူကြီးသေချာစေရန်မည်သည့်ပါတီများကခြယ်လှယ်ရှောင်ရှားရန်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတိုက်ခိုက်မှု၏သင့်လျော်သောဖြန့်ဖြူးသေချာစေရန်, ပညတ္တိကျမ်းလိုအပ်တယ်, မူအရ, အတိအကျရာတရားရုံးကတရားလို၏ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်မခေါ်ရပေမည်။
ဘယ်အချိန်မှာဘာသာရပ်ကိစ္စတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကခရိုင်တရားရုံးသို့မဟုတ်ခရိုင်တရားရုံးတွင်ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးကိုတရားရုံးအဖြစ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှိမရှိအကြောင်းပါ။ အဆိုပါစည်းမျဉ်း GVG မှာထပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ 23 GVG §အရခရိုင်တရားရုံးကတာဝန်ဝတ္တရားမသက်ဆိုင်အိမ်ရာအဘို့နှင့်ဟောင်းအစိတ်အပိုင်းများကနေငှားရမ်းခွင့်မှပေါ်ပေါက်အငြင်းပွားမှုများများအတွက်အငြင်းပွားမှုအတွက်ငွေပမာဏ၏, pecuniary ကျော်အငြင်းပွားမှုများနှင့် 5.000 ယူရိုမှတက်၏တန်ဖိုးနှင့်အတူ Non-pecuniary တောင်းဆိုမှုများပါဝင်သည်။ အဆိုပါခရိုင်တရားရုံးတွင် 5.000 ယူရို (ကြည့်ပါ။ 71 GVG §) ထက်ကျော်လွန်သွားပါသောသူအပေါင်းတို့သည်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တခြားအရာတို့တွင်အတာဝန်ရှိသည်။ တာဝန်ရဲ့တန်ဖိုးကို၏တွက်ချက်မှုယခု§§ 1 ff ။ ZPO အတွက်နောက်တဖန်ကိုယ်ကိုကိုယ်တွေ့။ အဆိုပါလိုက်ဖို့ Non-အရည်အချင်းတရားရုံးမှတရားစွဲဆိုဟုခေါ်တွင်ခဲ့လျှင် inadmissible အဖြစ်ပယ်ချမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တရားရုံးကပါတီများယခင်ကထောက်ပြသင့်ပါတယ်။ ထိုအခါလွှဲပြောင်းများအတွက်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုတောင်းဆိုသူအဘို့လည်းမရှိ။ ဤသည်ကိုလည်းအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော applications များအဘို့, ခရိုင်တရားရုံးမှာအဘယ်သူမျှမမဖြစ်မနေကိုယ်စားပြုမှုလည်းမရှိ။ တရားရုံးကထို့နောက်အရည်အချင်းတရားရုံး (281 ZPO §) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤသည်ကိုကိုးကား binding ဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံး၏ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းရည်ညွှန်းခဲ့သော, ဆုံးဖြတ်သည်။
အဆိုပါပါတီများ, သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါကတရားရုံးသဘောတူညီချက်ခေါ်ဆိုခတစ်ရုပ်ပစ္စည်း Non-အရည်အချင်းတရားရုံးအားဖြင့်ပေမည်။ အဆိုပါတရားခံrügelosလည်းထိတွေ့ဆက်ဆံပေမည်။ ခရိုင်တရားရုံးအမီ, သို့သော်သူက (504 ZPO §) ကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်တရားရုံးကထောက်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
ခရိုင်တရားရုံးနှင့်ခရိုင်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်နိယာမအတွက်အယူခံအတွက်စိန်ခေါ်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့ပိုမိုမြင့်မားတရားရုံးထို့နောက်အတွက်တရားစီရင်ခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ သို့သော်အယူခံဝင်တဦးတည်းကအနည်းဆုံး 600 ယူရိုသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးဥပမာပြောရရင်မှာလျှောက်လွှာ၏ပမာဏအတွက်ယုတ်ညံ့သာလျှင်, တရားရုံး, စီရင်တော်မူခြင်းအတွက်အယူခံဝင်ဖော်ပြခွင့်အာဏာခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတိပေးချက်: ဒီဒါခေါ် default အနေနဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ပထမဦးဆုံး, ထို့နောက်တစ်ဦးအယူခံဝင်ခွင့်မရှိကြသည်။ အဲဒီအစား, သငျသညျနှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်အယူခံနိုငျသညျ။ အတိုက်အခံတွင်ယခင်ကအရည်အချင်းတရားရုံးကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ခရိုင်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ဆန့်ကျင်အယူခံခရိုင်တရားရုံးမှာရည်ရွယ် - မိသားစုတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များ မှလွဲ. : အဲဒီမှာအယူခံတရားရုံးကအမြဲတာဝန်ရှိသည်။ ခရိုင်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်အယူခံတရားရုံးအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရလိမ့်မည်။
ဆက်စပ်ရှေ့နေ§§ 45 ff အညီလုပ်ခ setting ကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် VAT ၏ငွေကြေးပြန်လည်များအတွက်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတိုက်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပြောဆိုချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ RVG မှ
အဆိုပါ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ်§§ 45 ff အညီလုပ်ခ setting ကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် VAT ၏ငွေကြေးပြန်လည်များအတွက်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတိုက်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပြောဆိုချက်ကိုရှိပါတယ်။ RVG မှသူကကိုယ်စားပြုပါတီနုတ်ခွင့်ရှိသည်ကြောင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တောင်းဆိုမှုကိုမှာအကြွေး '' ကော်မတီဝင်များ၏ထုတ်ပယ်
ဒီနေရာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ3ထံသို့လာ
ယင်းမြီစားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်တောင်းဆိုမှုကိုကိုယ်ပိုင်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောတရားစွဲဆိုမှုတွင် 20.4.05 ၏ဒေဝါလီခံခြင်းတရားရုံး၏အမိန့်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောတရားစွဲဆိုမှု: နေအိမ်သို့ကို Wi ဒေဝါလီခံမြီစားအတွက်အရည်အချင်းကို
ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောတရားစွဲဆိုမှု: ထပ်မံဖွင့်လှစ်ပလီကေးရှင်း inadmissibility
ရှိပြီးသားမြီစား၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကျော်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောတရားစွဲဆိုမှုသည်ပြီးသားကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဘက်လိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တရားစွဲဆိုမှုများဖွင့်လှစ်နောက်ထပ် applications များ (35 InsO §) ခွင့်ပြုမထားဖွင့်လှစ်။
ထိုသို့ဖွင့်လှစ်မတိုင်မီသညျထလျှင်ကြွေးရှင်၏ပြောဆိုချက်ကိုပင်ထို့နောက်ဒေဝါလီခံအိမ်ခြံမြေသို့ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ) ကိုပြောဆိုချက်ကိုတရားစွဲဆိုမှု2၏ဖွင့်ပွဲမတိုင်မီအတည်ပြုကြောင်းမလိုအပ်ပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတရားမျှတမှုမရှိခြင်း၏ပြောဆိုချက်ကိုအဆိုပါကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောလုပ်ခ: ဝန်ပို၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ခွင့်ပြုချက်၏ add-ပြန်
သာ 14ငါ InsVV §ရှိသညျအတိုငျးပိုင်ဆိုင်မှုကိုထည့်သွင်းခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးနှင့် Secret အခွင့်အရေးများနှင့်အတူပိုင်ဆိုင်မှုများ, ယာယီစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာအလျောက်ငါတို့၌ပြုတော်မူကြောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ encumbered ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသာလျှင်သိသိသာသာလှုပ်ရှားမှုများဝန်ပိုနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောလုပ်ခ: ဝန်ပို၏ပမာဏသည် "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်" နှင့် "Betriebsübertraguများအတွက်
အခြေအနေပေါ် မူတည်. 17% နှင့်အတူ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်" ၏လေးစားမှုအတွက်လုပ်ခအတွက်တိုးနှင့် 10% နှင့်အတူ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်း" စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။
အင်ဖို @ gerichtsprozessanwalt ၌တည်၏။
AG ကမကောင်းပါ Iburg AG က Dannenberg AG က Elze AG က Hanns ။ စီးဆင်း AG က Hannover AG က Lingen AG က Norden AG က Nordenham AG က Nordhorn AG က Otterndorf AG က Papenburg Peine BY AG က Tostedt AG က Winsen AG က Wittmund AG က Wolfsburg ခုနစျပါး AG က ခရိုင်တရားရုံး ရှေ့နေ အယူခံဝင် Fachanwalt တရားရုံးအမှု တရားရုံးနေ့စွဲ ဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှု ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောတရားစွဲဆိုမှု ဝတ်စုံ ခရိုင်တရားရုံး LG က Hannover အယူခံတရားရုံး OLG Braunschweig OLG Bremen OLG cell OLG ဟမ်းဘတ် OLG Oldenburg တရားစီရင်ခြင်း တရားစီရင်ခြင်း ရှေ့နေ ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း ရက်စွဲကိုကိုယ်စားပြုမှု အချိန်အမြင်အပေါ် ရှေ့နေများ၏ပါဝါကို ကိုယ်စားပြုမှု အရပ်ဘက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရပ်ဘက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း foreclosure
မိုက်ကယ် Horak, LL.M
2 မတိုင်မီ hours
RT ကို INTA "ဒီအဲသယောပိအစိုးရ, ရှေးဟောင်း sup teff ၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများပြန်လည်အတိုင်းအတာကိုယူပြီးဖြစ်ပါတယ် ... https://t.co/7ZpA0AjvS2
3 မတိုင်မီ hours
horak ။ ရှေ့နေများ
တရားမျှတရေး Portal ကိုအောက်ပိုင်း Saxony
မှာ IR ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို
လျှောက်လွှာပုံစံများကို AG က Hannover
အားဖြင့်တင်ပြ WordPress ကို & အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး theme Anders Norén